အမှတ်တရလေးများ: စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်း ဇူလိုင်လဆွမ်းအလှူရှင်များစာရင်း-
ဇူလိုင်လဆွမ်းအလှူရှင်များစာရင်း-၁.(၁.၇.၂၀၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့ကိုဥာဏ်အေး+မနှင်းဝတ်ရည်၊သမီး-နိုရာဆောင်း မိသားစု(စင်္ကာပူ)(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)၂.(၂.၇.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့ကိုနေဖြိုးဇံ(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ(အရုဏ်+နေ့ဆွမ်းအလှူ)(APSA)၃.(၇.၇.၂၀၁၂)စနေနေ့ကိုအောင်ဝင်းထွဋ်+မတင်တင်ခိုင်၊သား-မောင်ကျော်ဇင်ထွဋ် မိသားစု(စင်္ကာပူ)မှ မောင်ကျော်ဇင်ထွဋ် ၏မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)နိုင်ငံတကာမှ အလှူရှင်များ၏ ဆွမ်းလောင်းအသင်း (၃နှစ်ပြည့်) အလှူပွဲကြီး(နေ့ဆွမ်းနတ်သုဒ္ဓါဒံပေါက်ဆွမ်းအလှူ)၄.(၈.၇.၂၀၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့နှစ်ဖက်မိဘများကို အမှူးထား၍ ဦးအောင်မြတ်ကျော်+ဒေါ်ခင်ဆွေမြင့်မိသားစု(ရန်ကုန်)၏အလှူ (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၅.(၉.၇.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့လမင်းအိမ်စာပေ နှင့် ဓမ္မမိတ်ဆွေများ (မူဆယ်မြို့)(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၆.(၁၂.၇.၂၀၁၂)ကြာသပတေးနေ့ကွယ်လွန်သူဖခင်ဦးတင်အောင်နှင့် မိခင် ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ရီတို့အား ရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစု(ထိုင်းနိုင်ငံ)၏ အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၇.(၁၅.၇.၂၀၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့)ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးမောင်မောင်သွင် နှင့် မိခင်ကြီးဒေါ်ခင်ခင်စန်း (ရုက္ခဗေဒဌာန)တို့အား ရည်စူး၍ သားသမီးမြေးတစ်စုကောင်းမှု။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၈.(၁၆.၇.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့ကိုသက်မြင့်ဦး+မကေသီလွင်၊သမီး-လွင်မာမင်း မိသားစု(စင်္ကာပူ)(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)ရာသက်ပန်ဆွမ်းပဒေသာပင် အလှူရှင်များအဖွဲ့(နေ့ဆွမ်းအလှူ)၉.(၁၈.၇.၂၀၁၂)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကိုသီဟ+မအိန္ဒြာအောင်၊သားသား-Simonဇော်သီဟ မိသားစု (စင်္ကာပူ)မှ သားသား-Simonဇော်သီဟ ၏(၉လပြည့်) မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)၁၀.(၁၉.၇.၂၀၁၂)ကြာသပတေးနေ့ကိုဇော်ဝင်းထွဋ်+မနှင်းယုယုဝင်း၊သမီးလေး-အေးချမ်းပွင့်ဖြူ မိသားစု(စင်္ကာပူ)မှသမီးလေး-အေးချမ်းပွင့်ဖြူ ၏မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ) (ကြာဆံချက်အလှူ)မြရတနာကျောင်းမှ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများအား ရေခဲမုန့်အလှူ။(၁၅,၀၀၀ ကျပ်)၁၁.(၂၀.၇.၂၀၁၂)သောကြာနေ့မအေးသီတာ(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ။(အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ) (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်)၁၂.(၂၂.၇.၂၀၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့ဦးသန်းမြင့်+ဒေါ်စံပယ် မိသားစု၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၃.(၂၃.၇.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့ကိုဇင်အောင်(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၄.(၂၄.၇.၂၀၁၂)အဂါင်္နေ့မနန်းဇာခြည်လတ်(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၅.(၂၅.၇.၂၀၁၂)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကိုဘုန်းကို+မအေးအေးမော်(စင်္ကာပူ)မှ မအေးအေးမော်၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၆.(၂၇.၇.၂၀၁၂)သောကြာနေ့မမျိုးသန္တာမောင် (စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၇.(၂၈.၇.၂၀၁၂)စနေနေ့မဖြူမာသိမ့်(စင်္ကာပူ) ၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၈.(၃၀.၇.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့မခင်ငြိမ်းချမ်းဦး(မလေးရှား)(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)ရာသက်ပန်ဆွမ်းပဒေသာပင်အလှူရှင်များ(နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၉.(၃၁.၇.၂၀၁၂)အဂါင်္နေ့မိခင်ဒေါ်ခင်ဦး၏ မွေးနေ့အလှူအဖြစ် သမီး-မမြရည်ညို(စင်္ကာပူ)၏ အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)သြဂုတ်လ-၁.(၁.၈.၂၀၁၂)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ဦးတင်ထွဋ်+ဒေါ်သန်းညွန့်တို့အား ရည်စူး၍သမီး- Dr.ခင်အေးမူ၊ဒေါ်မိမိတင်သား-ဦးအောင်လတ်+ဒေါ်နီလာမြင့်သား-ဦးမိုးအောင်ကျော်မြေး-စုထက်အောင်၊ဖြူထက်အောင် မိသားစု၏ အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၂.(၂.၈.၂၀၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့ကိုကျော်နိုင်(Kenny)+မဆွေဆွေခိုင်၊သား-မောင်ကောင်းမြတ်သူ(Asher)(စင်္ကာပူ)မိသားစုမှမဆွေဆွေခိုင်၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း)၃.(၆.၈.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့မယဉ်ယဉ်ပြုံး(စင်္ကာပူ)(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)လမင်းအိမ်စာပေနှင့် ဓမ္မမောင်နှမများ(မူဆယ်)(နေ့ဆွမ်းအလှူ)၄.(၇.၈.၂၀၁၂)အဂါင်္နေ့ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးအား ရည်စူး၍ ကိုငယ်လေး(စင်္ကာပူ)၏ အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၅.(၁၂.၈.၂၀၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့ကိုကျော်စွာဝင်း(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ(နေ့ဆွမ်းအလှူ)၆.(၁၃.၈.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့ကိုအောင်မြင့်ဦး+မမေသဇင်အုန်း၊သား-Matthew မိသားစု(စင်္ကာပူ)(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)လမင်းအိမ်စာပေနှင့် ဓမ္မမောင်နှမများ(မူဆယ်) (နေ့ဆွမ်းအလှူ)၇.(၁၅.၈.၂၀၀၁၂)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့Huang Cheng Hsien+Lu Yun PingHuang Chu Jung ၊ Huang Yu Ting (TaiWan)(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၈.(၂၀.၈.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့မခင်ငြိမ်းချမ်းဦး(မလေးရှား)(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)ရာသက်ပန်ဆွမ်းပဒေသာပင် အလှူရှင်များအဖွဲ့(နေ့ဆွမ်းအလှူ)၉.(၂၂.၈.၂၀၁၂)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကိုသက်မြင့်ဦး+မကေသီလွင်၊သမီး-လွင်မာမင်း မိသားစု(စင်္ကာပူ)(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)ရာသက်ပန်ဆွမ်းပဒေသာပင် အလှူရှင်များအဖွဲ့(နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၀.(၂၃.၈.၂၀၁၂)ကြာသပတေးနေ့Dr.မြတ်ဥာဏ်+ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း မိသားစု(ရန်ကုန်)မှ သမီး-မေမြတ်နိုးခိုင်၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)၁၁.(၂၆.၈.၂၀၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့ကိုသူရဦး+မမီမီသော်(စင်္ကာပူ)မှ မမီမီသော်၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၂.(၂၇.၈.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့မခိုင်ဇာလင်း(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၃.(၂၈.၈.၂၀၁၂)အဂါင်္နေ့မအေးနန္ဒာဝင်းမောင်(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၁၄.(၂၉.၈.၂၀၁၂)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မယဉ်ယဉ်ပြုံး(စင်္ကာပူ)(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)စက်တင်ဘာလ၁.ဦးမောင်မောင်သန်း+ဒေါ်ဥမ္မာဟိန်း ၊သား-မောင်ဥဂ္ဂါမင်း(ပါရမီ၊ရန်ကုန်)(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)၂.(၁၀.၉.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့မစုမြတ်မွန်(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၃.(၁၇.၉.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့ကိုရန်နိုင်ဝင်း (ဂျပန်) ၏ မွေးနေ့အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၄.(၁၉.၉.၂၀၁၂)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဦးခင်အောင်တင်+ဒေါ်ခင်ခင်ဦး မိသားစု(စင်္ကာပူ)(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၅.(၂၂.၉.၂၀၁၂)စနေနေ့မအေးဇာလီ(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၅.(၂၄.၉.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးအား ရည်စူး၍ ဒေါ်နန်းခမ်းထွန်း မိသားစု(ဂျပန်)၏ အလှူ။ (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)အောက်တိုဘာလ-၁.(၃.၁၀.၂၀၁၂)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဦးအောင်ဌေး+ဒေါ်မြတ်နွယ် ၊သမီး- မမြတ်မျိုးအောင် မိသားစု(စင်္ကာပူ)(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၂.(၇.၁၀.၂၀၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့Wat Kalay(FB)၃.(၉.၁၀.၂၀၁၂)အဂါင်္နေ့ကိုလှအောင်+မထားထားမြင့်မိသားစု (ဂျပန်)မှ မထားထားမြင့်၏မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)၄.(၂၂.၁၀.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့ကိုခင်မောင်ကျော်+Dr.နေကြည်မြင့်(စင်္ကာပူ)တို့၏ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၅.(၂၄.၁၀.၂၀၁၂)ကွယ်လွန်သူ Dr.ဦးမင်းနိုင် အားရည်စူး၍ ဒေါ်ကြူကြူခင်၊သမီး-မဖြူဖြူသန့် ၊မချိုချိုသန့် (စင်္ကာပူ)တို့၏ အလှူ။ (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)(အလှူငွေ လက်ခံရရှိပြီး)(WWKM)၃.(၂၇.၁၀.၂၀၁၂)စနေနေ့Dr.မြတ်ဥာဏ်+ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း၊သမီးလေး-မေမြတ်နိုးခိုင်မိသားစု မှ ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း၏ မွေးနေ့အလှူ။၄.(၂၈.၁၀.၂၀၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့ကိုအောင်သက်လင်း+မယဉ်ယဉ်နု(စင်္ကာပူ)မှ မယဉ်ယဉ်နု ၏မွေးနေ့အလှူ။ (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)နိုဝင်ဘာလ-၁.(၆.၁၁.၂၀၁၂)အဂါင်္နေ့ဒေါ်ရီရီ (USA) ၏ မွေးနေ့အလှူ (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၂.(၁၀.၁၁.၂၀၁၂)စနေနေ့မအေးမြတ်(စင်္ကာပူ)၃.(၁၈.၁၁.၂၀၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့ပန်ပန်(ဂျာမဏီအလှူရှင်)၄.(၁၉.၁၁.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့ကိုခင်မောင်ကျော်+Dr.နေကြည်မြင့်(စင်္ကာပူ)မှ Dr.နေကြည်မြင့်၏ မွေးနေ့အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)ဒီဇင်ဘာလ-၁.(၁.၁၂.၂၀၁၂)စနေနေ့(ဂျပန်)၂.(၁၀.၁၂.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးဘသော်အား ရည်စူး၍ ဒေါ်ကြည်လေး မိသားစု(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၂.(၁၂.၁၂.၂၀၁၂) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့Dr.မိုးကိုဦး+ မ၀င်းမင်းသစ် (ဘန်ကောက်) (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)၃.(၁၆.၁၂.၂၀၁၂)တနင်္ဂနွေနေ့ကိုသက်နိုင်ဦး+Dr.နှင်းဝတ်ကြည် မိသားစု(ထိုင်ဝမ်)မှသား-မင်းသစ်ထွန်း ၏ မွေးနေ့အလှူ(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ) (၂၀၁၃ ခုနှစ်)ဇန်န၀ါရီလ၁.(၂၀.၁.၂၀၁၃) တနင်္ဂနွေနေ့ကိုခင်မောင်လွင်+မညိုညိုဆန်း မိသားစု(စင်္ကာပူ) မှကိုခင်မောင်လွင်၏ မွေးနေ့အလှူ။ဖေဖော်ဝါရီလ-၁.(၈.၂.၂၀၁၂)ကိုခင်မောင်ကျော်+Dr.နေကြည်မြင့်(စင်္ကာပူ)၂.(၁၁.၂.၂၀၁၂)တနလာင်္နေ့ကိုခင်မောင်လွင်+မညိုညိုဆန်း မိသားစု(စင်္ကာပူ) မှကိုခင်မောင်လွင်+မညိုညိုဆန်း တို့၏ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အလှူ။မေလ-၁.(၂၅.၅.၂၀၁၃)ကိုသက်နိုင်ဦး+Dr.နှင်းဝတ်ကြည် မိသားစု(ထိုင်ဝမ်)မှသား-မင်းသစ်ထွန်း မိသားစု မှကိုသက်နိုင်ဦး+Dr.နှင်းဝတ်ကြည် တို့၏(၁၀နှစ်)ပြည့် မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည်အလှူ။(အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ)---------------------------------------မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း၊စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း အနေဖြင့် သံဃာအပါး (၄၀၀)ကျော်အား အပတ်စဉ် တနလာင်္နေ့တိုင်း (အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်း)များလောင်းလှူလျှက်ရှိပါသည်။ထိုကဲ့သို့ သံဃာတော်များအား ဆွမ်းများ မပြတ်လှူဒါန်းသွားနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ရာသက်ပန်ငွေပဒေသာပင် အလှူငွေများကို ပဒေသာပင်တစ်ခုလျှင် အလှူငွေ (၅၀၀၀၀ ကျပ်) နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံလျှက်ရှိနေပါသည်။မွေးနေ့အလှူရှင်များ ၊အမှတ်တရ အလှူရှင်များရှိပါက အလှူရှင်များ၏ အလှူရက်များကို ဦးစားပေး ဆွမ်းများဆက်ကပ် လောင်းလှူစေပြီး အလှူရှင်မရှိသော တနလာင်္ဆွမ်းပတ်တိုင်းတွင် ရာသက်ပန် ဆွမ်းပဒေသာပင် အလှူငွေများဖြင့် ပျက်ကွက်မှုမရှိအောင် ဆွမ်းများဆက်ကပ် ၊လောင်းလှူပေးလျှက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။အရုဏ်ဆွမ်း+နေ့ဆွမ်းအလှူ ဆွမ်းရက်တစ်ရက်အတွက် ကျသင့်အလှူငွေမှာ (၁၆၀၀၀၀ ကျပ်) ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်သွယ်လှူဒါန်းရန်-1.ဦးကောဝိဒ(စစ်ကိုင်း)Ph-092110202kovida9@gmail.com2.၀ါဝါခိုင်မင်း (မြန်မာပြည်) Ph-09 73095851nanwarwarmg2009@gmail.com 3.ကိုဥာဏ်အေး(စင်္ကာပူ)Ph-8139 9604 minlinkar21@gmail.com4.ကိုရန်နိုင်(ဂျပန်) Ph-080 3852 5214 (Softbank)nay.naywathan@gmail.com JP Bank Account ヤン　ナイン　ウイン　(14000-49306371)လေးစားစွာဖြင့်ဝါ၀ါခိုင်မင်း'
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ အခု ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း ကနေပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရုပ်မြင်သံကြားကနေ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မယ့် သမ္မတကြီး ဦးသိန်...
ဆန္ဒစောနေသောကြောင့်လားမသိ၊ သင်းကလေးတွေ လာခဲလိုက်တာ၊ ခါတိုင်းဆို ဒီအချိန်ရောက်ပြီ၊ အင်း ... အကြီးတွေကများ အငယ်တွေကို ကစားကွင်းတွေ ဘာတွေ ဟိုဟိုသည...
သာသနာတော်နှစ် ၂၅၅၆ ခုကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခု ကဆုန်လဆန်း (၉) ရက် ၊ ၁၈.၅.၂၀၁၃ စနေနေ့
အရုဏ် ကြက်သားကြာဇံဟင်းခါးဆွမ်းနှင့် နေ့ဆွမ်း ကုသိုလ်ရှင်
photo credit to : 8 DAYS A WEEK ENTERTAINMENT
Number of View: 274 ဆက်စပ်ပို့စ်များ ။ မြသွေးနီရဲ့သူငယ်ချင်းအိုင်ရင်း အိုင်ရင်းရေးသောစာများ (၁) ဆန္ဒနဲ့ဘ၀တစ်ထပ်ထဲကျကြပါစေ။
ကွယ်လွန်သူ မိခင်ကြီး (ဒေါ်ကျင်ရွှေ)အားရည်စူး၍ သမီး ဒေါ်စန်းစန်မြင့်၊ မြေး မောင်ဇွဲမြင့်မိုရ်မှ လှူဒါန်းသော မေလ ၂၀ ရက်နေ့အတွက် နေ့ဆွမ်း အလှူတော်ငွေ စင်္ကာပူဒေါ်လာ...
တစ်ခါတုန်းက တောအုပ်လေးတစ်အုပ်တွင် မျောက်လေးတစ်ကောင်နေထိုင်သည် ။ ထိုမျောက်လေးသည် စိတ်လည်းအလွန်တိုတက်ကာ ဘယ်အရာကိုမှ ရှည်ရှည်မတွေးတတ်ပဲ ပြီးစ...
ကိုယ်ရဲ့ စ်ိတ်က ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝကို ရောင်ပြန်ဟပ်စေပါတယ်။
ချစ်ခြင်းဆိုတာ ကံကြမ္မာလား၊ ဝဋ်ကြွေးလားလို့ ကြံစည်နေခိုက်မှာပဲ အချစ်ဆိုတာ ယုံကြည်မှုလို့ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးက ဆိုလာပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးမှာ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ...
ရွှေဗြူးတီးပရိသတ်များ မင်္ဂလာပါ… ဒီပိုစ့်က အစ်မတစ်ယောက် Request လုပ်ထားတာပါ။ ဒီလိုပိုစ့်မျိုးကို ကန်ဒီ့ဆိုဒ်မှာ တင်ပေးတာကိစ္စမရှိပေမယ့် ကိုယ်တိုင်က Makeup Arti...
(၁၂.၅.၂၀၁၃)တနင်္ဂနွေနေ့ မျှော်လင့်ခြင်း မိုးကောင်းကင် ပဉ္ဓမအကြိမ် အသည်းရောင်အသားဝါကာကွယ်ဆေးထိုးအလှူနေ့အတွက် ဆွမ်းအလှူရှင်များမှတ်တမ်း-
(၁၂.၅.၂၀၁၃)တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် မျှော်လင့်ခြင်း မိုးကောင်းကင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့၏ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် အသည်းရောင်အသားဝါ ကာကွယ်ဆေးထိုးအလှူကို...
နောက်တစ်နေ့ကတော့ ကျွန်းကလေးပေါ်မှာ ကျနော်တစ်ယောက်ထဲ လည်ပတ်ရမယ့် နေ့ပါပဲ၊ အရင်ရက်တွေတုန်းက ဆုံခဲ့ရတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေက ကိုယ်စီ အလုပ်သွားကြရလို့ ဘယ်သူမှ ...
" စာအန်ခြင်း " မျိုသိပ်ရလွန်းလို့ အ သွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ ၁ ၂ ၃ ၄ ဘဝကို ရေး ခဏနေတော့ . . . ၁ ၂ ၃ ၄ ဘဝကို ရေး ကိန်းဂဏာန်းက လက်တစ်ဖက် မပြည့်သေးဘူး။ မျိုသ...
မဝေးရဲဘူး-ဆိုတဲ့ လမ်းဟာ အရှေ့ဖက်ကမ်းခြေကို လွင့်စင်ထွက်သွားတဲ့ အနောက်ဖက်ကမ်းခြေရဲ့ ကြေကွဲ ညနေ...
Hi Readers, I seem to have the same- I am sorry entry- but here is another one again. Within this year my life have changed so much from beingamother of ...
တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့အသံတွေကို အင်္ဂလိပ်လို လက်ရေးလေးနဲ့ တတ်သလောက် ငယ်ငယ်က ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီစာအုပ်လေးကို ဟိုနေ့က ကားဂိုဒေါင်ထဲက ဗီဒိုတစ်လုံးထဲမှာ ပြန်တွေ...
I would like to say.. Thank you to Aphrodite( The Goddess of Love)/ (Princess of Cyprus).
You teach me about Love..
ကမ်းစပ်သို့ တဝုန်းဝုန်း လာရောက်ရိုက်ခတ်နေသော ရေလှိုင်းများကို ငေးမောကြည့်နေရင်း သူ့စိတ်တွေသည်လည်း ထိုရေလှိုင်းများလို လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ် ဖြစ်နေသည်ကို သတိထာ...
ခုတော့ ပျိုမေခင် ဒီကို တစ်ကယ်ပဲ ပြန်လာလည်ဖြစ်သွားပြီပေါ့လေ… တစ်အိမ်လုံးကို တောက်ပပြောင်လက်နေအောင် ရှင်းလင်းပြင်ဆင်နေရင်းက နှုတ်ခမ်းများကွေးလာသည်အထိ ...
အစာ နဲ့ မျှားခေါ်ခံရတဲ့ သတ္တ၀ါအသေးစားလေးတွေလို အစာနောက်လိုက်ထား
"မရယ်ရပါလား" ကိုလေချွန်ရင်း ....
Hercules: Meg, when I'...
Hi everyone reading TKE blog. As you’ve noticed, I’ve been away from blogging again. I guess…it’s high time I finally stopped blogging. When I went on hiat...
ဂဏန်းဗေဒင် ( စံဇာဏီဘို)
Forward Mail မှ ဆရာစံဇာဏီဘို ရဲ့ ဂဏန်းဗေဒင်လေး လက်ခံရရှိခဲ့လို့ စာဖတ်သူများအားလုံးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်ရှင်။ ဗေဒင်ယုံတယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မဖတ်ြ...
မန္တလေးတိုင်း၊တံတားဦးမြို့နယ် စပါးတွင်းကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေတွင်း အလှူရှင် မှတ်တမ်း နှင့် အလှူရှင်များ ဆက်လက်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။
ရေအလှူသည် သက်ရှည်ဆင်းလှ ၊ချမ်းသာရ၍ ဗလ,ပညာ ၊စင်ကြယ်စွာနှင့် လျှင်ခါ , ကျော်စော ၊ခြွေရံပေါသည် ဆာသောဒုက္ခ ကင်းစေသတည်း။ မန္တလေးတု...
မိခင်ဒေါ်ခင်ဦး၏ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သမီး-မမြရည...
မခင်ငြိမ်းချမ်းဦး(မလေးရှား)၏ အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ နှင့်...
မဖြူမာသိမ့်(စင်္ကာပူ) ၏ မွေးနေ့အလှူ။(၂၈.၇.၂၀၁၂)စနေနေ...
၂၇.၇.၂၀၁၂ မမျိုးသန္တာမောင်(စင်္ကာပူ) မှ မွေးနေ့အလှူ။
ကိုဘုန်းကို+မအေးအေးမော်(စင်္ကာပူ)မှ မအေးအေးမော် မွေး...
မနန်းဇာခြည်လတ်(စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ။(၂၄.၇.၂၀၁၂) အဂ...
ကိုဇင်အောင်(စင်္ကာပူ) မွေးနေ့အလှူ ကုသိုလ်ပြုပွဲ(၂၃.၇...
ဦးသန်းမြင့်+ဒေါ်စံပယ်မိသားစု (ရန်ကုန်မြို့)၏ အလှူပ...
မအေးသီတာ (စင်္ကာပူ)၏ အရုဏ်ဆွမ်း အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲအလှ...
ကိုဇော်ဝင်းထွဋ် + မနှင်းယုယုဝင်း ၊ သမီးလေး - အေးချ...
ဆောက်လုပ်နေဆဲဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဂယာ ဥရုဝေလတရားစခန်းအတွက် ...
ကိုသီဟ + မအိန္ဒြာအောင်၊ သားသား- Simon ဇွဲသီဟ၏ (၉) လ...
ကိုသက်မြင့်ဦး + မကေသီလွင် ၊သမီး-လွင်မာမင်း မိသားစ...
ကိုနေဖြိုးဇံ (စင်္ကာပူ)၏ မွေးနေ့အလှူ (၂.၇.၂၀၁၂)တနလာင်္...